Modafinil: Ebee ịzụta elu Modafinil ntụ ntụ | AASraw ntụ ntụ
/blog/modafinil/Modafinil: Ebe ịzụta nnukwu Modafinil ntụ ntụ
Ihe na 10 / 29 / 2017 by Dr. Patrick Young dere na modafinil. O nwere 7 Comments.
Modafinil: Ebe ịzụta oke mma Modafinil raw ntụ ntụ
Modafinil bụ ọgwụ ọgwụ ọgwụ maka ọgwụ akwara na-eme ka nchekwube ma gbochie ụra. Ọ bụ naanị ihe mere na-eme ka cognition na ebe nchekwa dịkwuo elu, ọ bụkwa ihe mgbakwunye dị elu nke a na-ahụkarị na ụdị nke nootropics.
Kedu otu ihe dị mma arụ ọrụ na nkwaliteING ụbụrụ gị na ọnọdụ gị?
N'adịghị ka ụfọdụ ọgwụ ọjọọ, e nwere ezigbo ihe àmà iji kwado mmetụta nke Modafinil.
Emere ka egosiri na ị ga - eme ka iguzogide ike ọgwụgwụ na ime ka ọnọdụ gị dịkwuo mma.
Na ndị okenye ahụike, modafinil na-eme ka "ike ọgwụgwụ, mkpali, oge mmeghachi anya na nche."
Nnyocha nke Mahadum Cambridge bipụtara hụrụ Modafinil ka ọ dị irè na mbenata "nzaghasị uche," ya bụ, mkpebi ọjọọ.
Modafinil ọbụna mma ụbụrụ na-ehi ụra na-ehi ụra dọkịta.
E nwere ihe ụfọdụ na-egosi Modafinil na-enyere ndị nwere IQ nta aka, ma mgbe ọtụtụ afọ nyochachara, ọ dịghị eche otú ahụ.
Kedu ka nke a bụ Modafinil kacha mma?
Jiri modafinil dịka iwu gị dọkịta gị. Gụọ ozi niile enyere gị. Soro ntuziaka niile anya.
Were nri ma ọ bụ na-enweghị nri.
Nsogbu ihi ụra na-arụ ọrụ ntụgharị: Were 1 awa tupu mmalite ọrụ.
Narcolepsy na ụbụrụ ụra: Were ọgwụ a n'ụtụtụ.
Gbalịa na-echefu ya ozugbo i chere banyere ya.
Ọ bụrụ na ọ dị nso n'ihe ndina ụra, mee ka ụbụrụ a tụfuru ma laghachi azụ n'oge gị.
Ejikwala 2 mee ihe n'otu oge ma ọ bụ mmezi ọzọ.
ebe to buy ịdị mma Dị elu Modafinil?
Cheta ihe niile online modafinil O si India?
Nke ahụ pụtara na ngwaahịa ndị ọtụtụ ụlọ ahịa e-commerce na-enye na-enweghị ike ịhọrọ. Niile weebụsaịtị ecommerce na-emepụta otu ngwaahịa ahụ!
Ya mere, mgbe ị na-enyocha onye na-ere, ị naghị eche banyere àgwà ngwaahịa (n'ihi na ngwaahịa ha na-ere bụ otu). Mana, ịchọrọ ijide n'aka na onye na-ere ya nwere ntụkwasị obi.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na omenala gị ejidere gị, ọ ga-anabata onye ahịa site na nkwado ndị ahịa? Hà na-enye ha nnwere onwe n'efu ma ọ bụrụ na ihe anaghị aga dị ka atụmatụ?
Enwere isi ndị na-ere ahịa modafinil pụrụ ịdabere na ya na ebe a ugbu a .Ọ bụ AASRAW si china.
Modafinil raw ntụ ntụ site na AASRAW bụ ihe a na-achọsi ike, ihe kachasị mma ma dị mma na modafinil na ahịa. AASRAW bụ ugbu a kacha mma ire modafinil raw ntụ ntụ online na ọtụtụ puku ndị ọrụ na-arụ ọrụ banyere ya potency.modafinil bụ Eugeroic ma ọ bụ na mfe okwu, a wakefulness na-akwalite gị n'ụlọnga. Mmetụta nke modafinil gunyere ntụrụndụ, mmelite nke uche, mmelite ọnọdụ uche, ncheta na n'ọnọdụ ụfọdụ ịdị nwayọọ euphoria.Ifuru na ịchọrọ mma n'enweghị ọkụ a oghere n'akpa gị, zụta uhie aasraw ugbu a!
Ọ ga-amasị m ịzụta 10grams nke Modafinil (Nootropics) ntụ ntụ
OK, Ị nwere ike ịga http://www.aasraw.com/contact/ ịkpọtụrụ anyị.
Kedu ka m ga - esi zụta ọgwụ ndị ị nyochaworo ebe a dị ka sibutramine na modafinil? A na-ejikọkwa ha ọnụ?
Ogo Ogo: Dị ka anyị kwere nkwa, ihe ọma anyị niile na-adị ọcha karịa 98%.
Tyrler Orrrick04 / 26 / 2018 na 6: 53 am
Ọ ga-amasị m ịnye ọnụahịa na uzuzu LGD-4033, YK-11, Modafinil, GW-501506, MK-2866, na MK-677. Daalụ.
0k, Anyị ga-akpọ gị azụ n'ime oge 8
Achọrọ m iweta ntụ ntụ modafinil
Ebee ịzụta akwa dị ọcha stanozolol ntụ ntụ?	Modafinil: Kedu ka m ga-esi were Modafinil uzuzu?